Kanopy "hery voninkazo" - Moy Mili
Home > Kanopy "hery voninkazo"
Kanopy "hery voninkazo"
Ny kanopy Moi Mili tany am-boalohany avy amin'ny famoriam-bokatra "Von-bonika" dia ravaka tsara tarehy tsy natao ho an'ny efitranon-jaza fotsiny, fa ho an'ny efitrano fatoriana na terrace. Ny modely floral vita amin'ny watercolor dia malefaka nefa feno hafaliana sy maro loko. Ny kanô dia voatana mafy mateina rongony malefaka sy malefaka. Napetraka eo am-baravarana ny rehetra, isaorana izay mitazona ny endriny. Izy io dia mety ho haingon-trano vita am-pandriana na manompo toy ny lay amin'ny zaza zokiolona.
Ny canopy fandriana ho an'ny zazakely Mili mile dia mety ho haingon-trano anatiny ary hahafahan'ny zanakao mandry amin'ny fampiononana. Izy io dia vita amin'ny landihazo manify avo lenta ary apetraka eo amin'ny basy misy savaivony 50 cm. Misaotra ny fatorana malefaka izay azo esorina mora ary sasana. Ao anatin'ny canopy dia misy fihodinana ahafahana manantona haingoana na jiro fanampiny. Ny endriny manontolo dia manana endrika tsara tarehy sy tantaram-pitiavana. Zaza iray lehibe dia azo ampiasaina ho toy ny lay, renim-pianakaviana ho toy ny harato moka eo amin'ny faritry, ary ny ahantona eo ambonin'ilay côt dia hamorona toerana manokana ho an'ny zaza.
Lamba: 100% landy manify 120g, nohamarinin'ny OEKO-TEX®,
Habe: 50 savony fantsom-bolo, 240 canopy lava cm.
Default Title - PLN 420.00 PLN